sensation – Dhammadīpa
Posted on5Nov 2016 by Ashin Sopāka
And he has also gainedafoothold.” – SN 36.4
“Yo etā nādhivāseti, uppannā vedanā dukhā;
Akkandati parodati, dubbalo appathāmako;
“Yo cetā adhivāseti, uppannā vedanā dukhā;
Sa ve pātāle paccuṭṭhāsi, atho gādhampi ajjhagā”ti.
“ဉာဏ်အားနည်းသော စွမ်းအားနည်းသော အကြင်သူသည် ကိုယ်၌ ကျရောက် လျက်ရှိသောအသက်ကိုပင် ဆောင်ယူသွားနိုင်လောက်သော ပေါ်ပေါက်လာသော ထို ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုသည်းမခံနိုင်၊ ဝေဒနာတို့ဖြင့် တွေ့ထိခံရသော် တုန်လှုပ်၏၊ မြည်တမ်းငိုကြွေး၏၊ ထိုသူသည် ဝဲသြဃ၌ မတည်တံ့နိုင်သည်သာမက ထောက် တည်ရာမျှကိုလည်း မရနိုင်။
“အကြင်သူသည်ကား ကိုယ်၌ ကျရောက်လျက်ရှိသော အသက်ကိုပင် ဆောင်ယူ သွားနိုင်လောက်သောပေါ်ပေါက်လာသော ထိုဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုသည်းခံနိုင်၏၊ ဝေဒနာတို့ဖြင့် တွေ့ထိခံရသော် မတုန်လှုပ်၊ ထိုသူသည် ဝဲသြဃ၌ တည်တံ့နိုင်သည် သာမက ထောက်တည်ရာကိုလည်း ရနိုင်၏။”
“Ai không chịu đựng nổi, các khổ thọ khởi lên,
Thân đau, hại mạng sống, cảm xúc khiến run rẩy.
Ai than vãn, khóc lóc, suy nhược, thiếu kiên cường,
Không đứng trên vực sâu, không đạt chỗ chân đứng.
“Ai có thể chịu đựng, các khổ thọ khởi lên,
Thân đau, hại mạng sống, cảm xúc không run rẩy,
Vị ấy vượt vực sâu, đạt tới chỗ chân đứng.”
Top: Juvenile Oriental Magpie Robin
Lower: Juvenile Mystery bird, perhapsaFlowerpecker or Sunbird
©Ashin Sopāka 2016